Mijanona ho andry manan-danja indrindra amin'ny tatitra momba ny indostrian'ny fiara manerantany i Shina
Ireo mpanao fiara lehibe telo Alemanina Volkswagen, BMW ary Daimler dia nahazo tombony tamin'ny "ambaratonga ambonimbony kokoa" tamin'ny fanarenana tsena tany Chine satria nitombo sivy isan-jato ny varotra Q3 tany Chine raha ampitahaina tamin'ny taon-dasa. BERLIN, 23 desambra (Xinhua) - Ny tsena sinoa indray ...
Manitsy ny vidin-tsolika amin'ny entana entina i Shina
Hanitsy ny saran'ny fanafarana entana amin'ny vokatra marobe i Shina manomboka amin'ny 1 Janoary 2021 hanohanana ny fampiroboroboana ny paradigma fampandrosoana vaovao ary hampiroborobo ny fampandrosoana avo lenta, hoy ny vaomieran'ny fadin-tseranan'ny fadintseranana. Ny saram-panafarana vonjimaika ambany kokoa noho ny be mpitia indrindra ...
Shina avelany hanafatra vy amin'ny taona ho avy
Manomboka amin'ny 2021, avelan'i Sina ny fanafarana fitaovana fanodinana vy sy vy mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly satria tsy mandany fako matevina izy ireo, hoy ny tompon'andraikitra. Voasoratra mazava ny fepetra hentitra momba ny fitantanana ny fanafarana ny vy sy ny vy.
Frantsa dia nanambara ny drafitra 8-Bln-Euro hanavotra ny indostrian'ny fiara marary
Ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny talata teo dia nanolotra drafitra famonjena iray mitentina valo tapitrisa euro (8,78 miliara dolara amerikana) hanampiana ny famerenana ny indostrian'ny fiara eto an-toerana voadona mafy noho ny fanidiana anti-coronavirus. Ny drafitra dia mifantoka amin'ny famokarana fiara mifandraika amin'ny tontolo iainana. “Ny sta ...